Gbasawanyere ígwè igwe echebe
ihe agha yinye
Ferruled igwe anaghị agba nchara eriri ntupu
Hand-kpara igwe anaghị agba nchara eriri ntupu
chainmail ákwà mgbochi
ọnụ ọgụgụ ntupu ákwà mgbochi
metal eriri igwe drapery
ntupu ákwà mgbochi
Waya ntupu belt
agbụ njikọ ákwà mgbochi
igwe anaghị agba nchara green facade
Perforated Metal N'uko
Gbasawanyere metal mpempe akwụkwọ
Ji achọ ntupu maka mpụga mgbidi cladding
Gịnị Bụ Ofdị Uwe?
site ha na 20-10-24
Plain Weave bụ akwa waya kachasị eji na nke kachasị mfe. Igwe ọ bụla na-acha ogologo ọkụ (waya na-agba ọsọ-dịka ogologo nke akwa) na-agafe n'ụzọ ọzọ na n'okpuru wires na-agafe n'ụzọ site na akwa (jupụta ma ọ bụ gbaa wires) na 90 ogo angles. Ọ nwere nnọọ dịgasị iche iche nke ngwa ...
Eriri waya ntupu?
1. Akara Aka: Akara akara akara na ntanetị ntanye na-enweghị ike ihichapu ya. 2. Gbajiri Oghere: Multi-iberibe gbajiri wires n'otu saịtị na-etolite oghere na elu. 3. Ebe Rusty: Acha gbanwere ya site na corrosion. Agba ntụ dị n’elu ala. 4. Waya gbawara agbawa: Broken of single waya. 5. Waya Azụ: ...
Olee otú Iji Tụọ Uwe Waya?
Azịza: Ohere sara mbara na-egosipụta oghere n’etiti wires ndị yiri ya. B: Mesh Count were mara dị ka ọnụ ọgụgụ nke oghere kwa linear inch. Enwere ike igosi onu ogugu dika onu ogugu, uzo, ma obu onu ogugu abuo ma oburu na ihe ahu bu akwa puru iche nke anakpo akwa oghere - nke obula ...
Wanna ịmata ozi ndị ọzọ?
Kpọtụrụ anyị taa maka ịgba izu.
Adreesị:Mpaghara mmepụta ihe nke ọwụwa anyanwụ, Anping, Hebei, China
Anyị na-emeghe: Mn-Fr: 9: 00 am-6: 00 pm